Sida loo Beddelaan MSWMM Faylal ay si fudud loo AVI
> Resource > Video > Sida loo Beddelaan MSWMM Faylal ay si AVI
Faylal ay la extention file .mswmm waa files mashruuca abuuray by Windows Movie abuuray. Iyagu ma ay files video. Sidaas, aad uma ciyaari karo files MSWMM in qaar ka mid ah ciyaartoyda warbaahinta si joogto ah sida iPhone, Game consoles'ka, PSP, oo iyaga la wadaagto goobaha video qaar ka mid ah iwm Tan iyo AVI waa mid ka mid ah qaabab video ugu caansan in noqon kartaa mid taageero qalab iyo codsiyada ugu badan , dad badan oo doonaya in loogu badalo MSWMM in AVI ugu dheeraad ah.
Maqaalkani waxa uu inta badan waxay muujinaysaa sida loo badalo files MSWMM in AVI gudbiyo talaabo talaabo ah. Marka hore, waxaad u baahan tahay badbaadin files MSWMM aad sida a video files, oo markaas waxaad isticmaali kartaa jecel aad video Converter in iyaga loogu badalo in ay qaab AVI. Halkan, si toos ah ayaan soo bandhigo Wondershare Video Converter ( Video Converter u Mac ). Waxa ay noqon kartaa MSWMM la jecel yahay in Converter AVI, diinta videos degdeg ultrafast oo tayo sare leh.
Marka hore, waxaad leedahay si uu u badbaadiyo files mashruuca MSWMM sida video files. Just guji menu File ee bidixda xagga kore ee interface weyn ee Windows Movie Kan sameeyey ee, doortaan "Mashruucan Open" in la furo mid ka mid ah files mashruuca MSWMM deegaanka, socda, jiidi faylka keeno si Jadwalka hoose. Ugu dambeyntii, tag "Finish Movie"> "Save si aan computer" inay u dhoofiyaan file a video wmv.
2 Import video files si MSWMM si AVI video Converter
Markaas, abuurtaan Wondershare video Converter. Waxaad geli doonaa interface loogu badalo tan app ee. Si fudud riix badhanka on dhinaca kore ee bidix ee interface ka. Markaas daaqad arbushin doonaa, taasoo keentay in aad soo dhoofsadaan badbaadiyey video files in tallaabo 1.
In tallaabadaas, waxaad sidoo kale la furo saarka liiska hoos-hoos qaab ama guji image qaabka guddiga Qaabka wax soo saarka. Kolkiiba, qaab wax soo saarka daaqadan app ee arbushin doonaa. Just u tag "qaab"> "Video"> "AVI".
4 Beddelaan files MSWMM in files AVI
Ugu dambeyntii, kaliya aad ku dhufatey "Beddelaan" button on geeska midig ugu hooseysa tani waxay ka Converter video 's interface ugu weyn. App Tani bilaabi doonaa si loogu badalo aad videos in avi videos, iyo diinta video la dhamaystiri doono ka dib in muddo ah.
App Tani badbaadin doonaa files gediyay galka wax soo saarka ay. Wadadda file saarka waa hoose ee interface ugu weyn video Converter ee. Dabcan, waad bedeli kartaa naftaada by. Ka dib markii ay diinta ka, waxaad ka heli kartaa wax soo saarka files AVI sida Jidka file ama si toos ah ugu riixaya doorasho Open Folder ag.
Top 5 Online Free VOB in AVI Converter